PVC Profaịlụ Ọdịdị Dị Elu & Ntanetị profaịlụ profaịlụ - China PVC Profaịlụ Ọsọ Dị Elu & Onye Nweta Profaịlụ Extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
PVC Profaịlụ Ọsọ Dị Elu & Ntanetị profaịlụ profaịlụ
Ebe nke Si Malite:
Ezubere usoro mmepụta YF maka ịpịpụta windo plastik PVC na ọkpọkọ eriri ọkpọkọ, akụkụ aluminom-plastic, wdg.
Nke a akara atụmatụ kwụsiri ike plasticization, elu mmepụta, ala sheering ike, ogologo ndụ ọrụ na ndị ọzọ benefits.The mmepụta akara mejupụtara akara usoro, conical ejima ịghasa extruder ma ọ bụ yiri ejima ịghasa extruder, anwụ, mmezi unit, wepụ anya unit, film ekpuchi igwe Enwekwara onye na-ebubata ya na onye na-agbanwe ọkụ ugbu a (ABB ma ọ bụ Eurotherm drive), onye na-ahụ maka ọnọdụ okpomọkụ (RKC, Japan). ọ nwekwara ike mepụta profaịlụ ụfụfụ.
Extruder ike (kw)
Mmiri jụrụ oyi (m3/ h)
Mwepụ ikuku (m3/ min)
Mara: Nkọwapụta ga-agbanwe na-enweghị ọkwa.
1. Jwell bụ kasị plastic extrusion igwe emeputa na China.We na-arụ ọrụ anya na ụwa ama ika , gị akụrụngwa nwekwara ike a kwadebere na ihe ọ bụla akụrụngwa ika ị chọrọ.
2. Jwell nwere ejima parrel ịghasa extrusion ule akara na otu ịghasa ule akara. Lab ule anyị na-akwado gị nwalee n'okpuru nrụpụta ezigbo mmepụta yana ịkwalite teknụzụ nhazi gị site na nnwale anyị wee nyere gị aka ịhọrọ ụdị akụrụngwa kwesịrị ekwesị.
3. Na-arụ ọrụ na Jwell ị nwere ike inwe obi ike na ọrụ gị na mmezi chọrọ ga-n'ụzọ ziri ezi akwụkwọ na na ị nwere kpọmkwem ihe onwunwe na nkà na ebe tupu mmalite. Ndị otu anyị nwere ahụmahụ ga-arụ ọrụ na gị iji chọpụta ndị mmadụ, akụrụngwa na akwụkwọ usoro ị ga-achọ iji kwado ọrụ nlekọta gị.
4. Jwell na-enye ọzụzụ teknụzụ, ịkwọ ụgbọ ala na sistemụ maka ndị ọrụ na ndị injinia sitere na ndị na-ebubata si n'akụkụ ụwa niile.
A na-akwakọba igwe niile site na ndị otu ọkachamara anyị, a ga-eju ya site na pallet osisi. Maka akụkụ ụfọdụ dị mkpa, anyị ga-eji igbe osisi buru ibu.
Pee breathable Nkiri Production Line
XPS Okpomọkụ mkpuchi foaming Boad Extrusion Line (CO 2 amfụfụ Technology)
JWZ-BMJT500/1000 Fụọnụ Nkedo Machine
Nwebiisinka 2020 CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.